iPhone 8 Plus ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကထိုက်တန်သလား။ အင်္ဂါရပ်များ, စျေးနှုန်းနှင့်ထို့ထက်ပို။ | Gadget သတင်း
iPhone 8 Plus အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဆန်းစစ်ပါသည်
Karim Hmeidan | | မိုဘိုင်း, reviews
iPhone 8 Plus ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့တယ် မကြာသေးမီက iPhone X သည်မျှော်လင့်ထားသည့် iPhone ဖြစ်သော်လည်း iPhone အသစ်ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး Samsung နှင့် Samsung ကဲ့သို့သောစမတ်ဖုန်းများကဲ့သို့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နယ်နိမိတ်မရှိဘဲစတင်ခဲ့သည့်အစွန်းများကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တစ် ဦး တည်းမဟုတ်သည့် Apple ၏သက်တမ်းတိုးခြင်း Apple သည် iPhone 8 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယခင်ဗားရှင်းဖြစ်သော iPhone7နှင့်ဆင်တူသည့်စဉ်ဆက်မပြတ် iPhone ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်သိသာထင်ရှားတဲ့ Apple ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတူညီတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုဈေးကွက်ထဲမတင်ပို့နိုင်ခဲ့ဘူး။ The iPhone 8 သည်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြစ်သည်ဟုတ်ပါတယ်, သူက၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲနှင့်၎င်း၏အတွင်းပိုင်း၌ပို။ ပင်သိသာအပြောင်းအလဲများကိုရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ iPhone ဟောင်းကို iPhone 8 အသစ်တစ်ခုအတွက်အသစ်တဖန်ပြန်လည်စဉ်းစားရန်စဉ်းစားနေပါက iPhone X (ယူရိုအချို့ကိုချွေတာခြင်းအပြင်) ယူဆောင်လာမည့်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားပါက iPhone 8 သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကစမ်းသပ်ပြီးကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ပါတယ် iPhone 8 ကဒီဇိုင်းကို iPhone7နဲ့တူအောင်လုပ်ပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အပြောင်းအလဲကြီးတဲ့ဘက်ထရီပါလာတယ်။ ခုန်ကျော်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Apple iPhone 8 Plus အသစ်အကြောင်းမင်းတို့အားလုံးပြောပြပါမယ်။
2 ကျွန်ုပ်တို့၏အိတ်ကပ်ထဲမှ iPhone 8 ကင်မရာ
3 အရာအားလုံးရဲ့ ဦး နှောက်ကို A11 Bionic လို့ခေါ်တယ်
4 အများဆုံးတတ်နိုင် option ကို
5 iPhone 8 Plus အသစ်၏ဓာတ်ပုံပြခန်း
6 iPhone 8 Plus နှင့်ရိုက်ယူထားသောဓာတ်ပုံများ (တည်းဖြတ်မှုမရှိ)
8 အကောင်းအဆိုး cons
အ ဒီ iPhone ၏သုံးသပ်ချက်များ 8 (ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ ကျွန်တော် iPhone 8 Plus ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးပြီ)aကိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည် iPhone6ဟောင်းမှဆွဲယူနေသည့်ဒီဇိုင်း, ဒီဇိုင်းအဆင့်မှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုယ်စားပြုပေမယ့် Apple ကအောက်ပါအိုင်ဖုန်းလေးခုအတွင်းဆွဲယူသွားတဲ့ iPhone, ၄ င်း၏ပုံသဏ္ofာန်ကြောင့်အချို့သည် "surfboard" ဒီဇိုင်းအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောမျှတစွာအဆင်ပြေသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒီဇိုင်းကကျွန်တော့်အမြင်အရပိုကောင်းတယ်၊ နောက်ကျောကိုမှန်ထဲထည့်ထားတယ် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော iPhone များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော iPhone4ကိုသတိရစေသည်။
မဟုတ်ပါ၊ နောက်ဘက်ဖန်ခွက်ကိုစိတ်မပူပါနဲ့၊ အဲဒါကိုပြန်လည်ပြုပြင်တာကဖန်သားပြင်ထက်ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာ Apple သိထားပေမဲ့၊ စမတ်ဖုန်းတွင်တပ်ဆင်ထားသောအခိုင်မာဆုံးဖန်ခွက် (သူတို့က Corning မှယောက်ျားတွေနဲ့အတူဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။ ) သေချာအောင်သတိထားပါ၊ သင်ကမြေပြင်သို့ပစ်ရန်မလိုပါ။ အမှန်တရားကတော့ကြည်လင်တယ် မယုံနိုင်လောက်အောင်ထိပေးသည်, နှင့် estetically, သင်ကဖုံးလွှမ်းထားခြင်းတက်အဆုံးသတ်ရင်တောင်ဒါဟာတော်တော်လေးကြည့်ရှုသည်, ငါဖုံးအုပ်မပါဘဲဝတ်ဆင်သောအခါငါနောက်ကျောအပေါ်တစ် ဦး ပိုလီကာဗွန်နိတ်အိတ်ရှိမရှိငါ့ကိုလူတစ် ဦး ထက်ပိုမေးတယ်။ ရှေ့ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော iPhone ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ အရောင်များကိုပြောင်းလဲစေသောဂန္ထဝင်အနားများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်ရှိနေသည်။ Space Grey (သင်ဓာတ်ပုံများတွင်သင်မြင်ရသော) အနက်ရောင်ရှေ့တွင်ရှိပြီးရွှေသို့မဟုတ်ငွေရောင်အဖြူသည်။
ဟုတ်တယ် အရင်မော်ဒယ်တွေလိုပဲငါမကြိုက်တာကကင်မရာကထွက်လာတယ်။ Plus မော်ဒယ်တွင် iPhone7Plus တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ကင်မရာနှစ်ခုရှိသည်။ နှစ်ခုလုံးမှာထူးခြားနေ၏။ Apple သည်ဖန်သားထဲတွင်အလူမီနီယံအစွန်း၏ပေါင်းစည်းမှုကိုကောင်းမွန်စွာဖြေရှင်းပြီးပြီဟုဆိုရမည်။ ဖန်ခွက်ထဲမှာဖြစ်ပေမယ့်ကွဲလွဲမှုတွေကြုံရရင်တော့ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖော်ပြမထားပါဘူး။
ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်စက်ရဲ့သေတ္တာကိုယ်တိုင်က၊ သူတို့ကသင့်အားပေးသောထုပ်ပိုးမှုသည်ပစ္စည်း၏အရောင်အရကွဲပြားသည်။ ဒါ့အပြင်အက်ပဲလ်ဟာဖုန်းရဲ့နောက်ဖက်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေ၊ နယ်မြေဒေသတွေကစားသုံးမှုထိန်းချုပ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီ။ အခုဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ဝယ်လိုက်တဲ့နေရာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ဥပမာအမေရိကန်မှာ အဘယ်သူမျှမပုံနှိပ်ဖို့မရှိတော့လိုအပ်သော။
ကျွန်ုပ်တို့၏အိတ်ကပ်ထဲမှ iPhone 8 ကင်မရာ
သငျသညျအခြို့သောလိုလျှင် ဒီ iPhone အသစ်ကိုရဖို့အကြောင်းပြချက်, ကင်မရာကမင်းလိုအပ်တာတစ်ခုပဲ။ ဒီ iPhone 8 အသစ်ရဲ့ကင်မရာသိသိသာသာတိုးတက်လာတယ်၊ သိသာထင်ရှားတဲ့ထူးခြားချက်တော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့သင်ကကင်မရာပါတဲ့အိုင်ဖုန်းတစ်ခုမှလာလျှင် Plus ဗားရှင်းကိုသွားခြင်းသည်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အက်ပဲလ်သည် 8 / 1,8 နှင့်ƒ / 2,8 ရှိသည့်မှန်ဘီလူးများဖြင့် iPhone အဆင့်ရှိကင်မရာများကို hardware အဆင့်တွင်သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။မျှတသောအလင်းအခြေအနေများနှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သိသာသောအရာဖြစ်သည်။ အသစ်တစ်ခုကိုငါအရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ် နှေးကွေးစွာထပ်တူပြုခြင်း flash ကိုလုပ်မည့် Flash ဓာတ်ပုံရိုက်နည်းသစ် သင်ရိုက်ကူးသည့်အရာနှင့်နောက်ခံနှစ်ခုလုံးကိုထွန်းလင်းထားသည်iPhone ကဲ့သို့စက်ဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည့်အရာ။
iPhone7Plus ၏ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုသည်ပုံသဏ္modeာန်အသစ်၊ အသစ်၏အသစ်အဆန်းဖြစ်သည် iPhone 8 သည် Portrait Lighting ဖြင့် Portrait Mode ကိုလှည့်စားနေသည်ဖြစ်နိုင်ခြေ ငါတို့လုပ်တဲ့ပုံတူတွေကိုထွန်းလင်းတောက်ပစေ ဓာတ်ပုံစတူဒီယိုတွင်ဖော်ပြနိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသောဖွဲ့စည်းမှုများအရအကွာအဝေးကိုချွေတာသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ISP အသစ်သို့အလင်းပိုမိုရယူနိုင်သည် (image signal processor) ကို Apple ၏ကိုယ်ပိုင်ယောက်ျားများမှဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီး iOS 11 software အတွက်ယခုကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် ပုံတူအများကြီးပိုကြည့်ပါစေ။ သင်ဓာတ်ပုံရိုက်သူများသည်ဤအလင်းရောင်အသစ်ချိန်ညှိချက်များဖြင့်တိုးတက်လိမ့်မည်။
အခုအသစ် ISP သည်ကျွန်ုပ်တို့အားချက်ချင်းဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်, သင်ရှပ်တာနှိပ်ခြင်းနှင့်ရိုက်ကူးလျက်ရှိသည်ဓာတ်ပုံအကြားကွာခြားချက်သတိမထားမိ။ ယခုကြောင်းဖော်ပြရန်မ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗီဒီယိုများကို 4K တွင် 60fps နှုန်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်, လှုပ်ရှားမှုများကိုပိုမိုအရည်ပျော်စေမည့်အရာ (သူတို့ဖန်တီးထားသည့်ဗွီဒီယိုများကိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကြည့်ရှုနိုင်မည်)၊ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခြင်းအပြင် 240p အတွက် 1080fps မှာနှေးကွေးဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ တိုးတက်မှုများစွာကိုသတိမပြုမိဟုဆိုရမည်။
အရာအားလုံးရဲ့ ဦး နှောက်ကို A11 Bionic လို့ခေါ်တယ်
နောက်ဆုံးအဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Apple ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Processor အသစ်ပါ။ iPhone 8 နဲ့ iPhone X တို့ရဲ့မျှဝေတဲ့ processor ပါ။ စက်ရုပ် A11၎င်းအတွက်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်စွမ်းအတွက် Bionic ငါတို့ပြောနေသည့်ပုံတူများ၏အလင်းရောင်ကိုထုတ်ယူပါ၊ ၎င်းသည် Augmented Reality အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည် (ဒီကင်မရာဘေးမှာဒီ iPhone 8 အသစ်နဲ့တွေ့ရတဲ့အဖြစ်မှန်ရဲ့အာရုံဟာမယုံနိုင်စရာပါ)၊ iPhone X တွင်တွေ့ရမည့် Face ID.
Processor မြန်နှုန်းအဆင့်တွင်ရှုထောင့်အားလုံး၌ကြီးမားသောတိုးတက်မှုရှိသည်။ iOS 11 နဲ့အရာအားလုံးပိုပြီးချောမွေ့ပါတယ် iOS 11.0.1 (နောက်ဆုံးဗားရှင်း) နှင့်၎င်း၏ယခင်ဗားရှင်း (နွေရာသီ beta များပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့သော GM) နှစ်ခုစလုံးသည်အလွန်မကောင်းလှပေ။ ကျွန်တော့်ကိုထည့်ပြီးပြီ iOS 11.1 Beta ကို 1နှင့် Beta ဗားရှင်းဖြစ်သော်လည်း ကျနော်တို့ကပို။ ပင်အလုပ်လုပ်တယ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်.
အများဆုံးတတ်နိုင် option ကို
iPhone 8 အသစ်ဖြစ်တဲ့ဖန်သားပြင်အတွက်အကြောင်းပြချက်အသစ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပိတ်ချင်ခဲ့တယ်။ ဒါမှန်လျှင် iPhone X မှာတွေ့ရတဲ့ OLED မဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်သူကတစ် ဦး သည်လည်းမှန်သည် Retina HD display ကို Apple ကအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်အခုလည်းသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီ option ကိုသုံးခွင့်ပြုလိုက်တယ် True Tone၊ အရောင်အပူချိန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်အပြင်အဆင်အသစ်တစ်ခု ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့တဲ့အလင်းရောင်အခြေအနေနဲ့အညီပြတယ်။ ယခင် iPhone ဗားရှင်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်မျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခု။
iPhone 8 မတိုင်မီပုံစံတစ်မျိုးမှလာလျှင် iPhone7ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်အကယ်၍ သင်သည် iPhone7တွင်ရှိနေလျှင်သင် iPhone X ကုန်ကျသောငွေကိုမပေးလိုပါကလာမည့်နှစ်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေနိုင်သည်။ သို့သော်သင့်တွင် Plus ဗားရှင်းမရှိခဲ့ပါက iPhone 8 Plus အသစ်သည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ Apple ကိုလျှော့ချလိုက်ပြီလို့ခင်ဗျားတို့ကိုမမေ့စေချင်ဘူး 64Gb နှင့် 256Gb အရောင်းပမာဏကျွန်ုပ်တို့မှာ 64Gb ဗားရှင်းရှိပြီးလုံလောက်ပါတယ်။ သင့်ကိုအားပေးပါ အဲဒါကိုတို့ထိရန်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်မျက်လုံးဖြင့်ကြည့်ရှုရန်အတွက် Apple Store မှရပ်တန့်ပါသင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်
iPhone 8 Plus အသစ်၏ဓာတ်ပုံပြခန်း
iPhone 8 Plus နှင့်ရိုက်ယူထားသောဓာတ်ပုံများ (တည်းဖြတ်မှုမရှိ)
၎င်းတွင် iPhone X ကဲ့သို့ A11 Bionic ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သည်
၎င်းသည် iPhone X နှင့်မတူအောင်အနားများကိုထိန်းသိမ်းထားသည်
ကျနော်တို့စွမ်းရည် configurations ပိုပြီးလက်လွတ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » iPhone 8 Plus အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဆန်းစစ်ပါသည်
ပေါ့ပါးသော Linux ဖြန့်ချိမှုများ
GoPro Hero6 သည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီး 4k ဗီဒီယိုများကို 60 fps နှုန်းဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်